Hawlgallo amni adkayn ah oo ka socda Bossaso iyo Garowe & dilka Garyaqaan Awaare oo dad loo qabtay. – Radio Daljir
Hawlgallo amni adkayn ah oo ka socda Bossaso iyo Garowe & dilka Garyaqaan Awaare oo dad loo qabtay.
Nofeembar 12, 2009 12:00 b 0
Bossaso, Nov 12 – Hawlgallo ammaanka lagu adkaynayo ayaa xalay si rasmi ah uga bilawday magaalooyinka waaweyn ee Puntland, gaar ahaanna Bossaso iyo Garoowe.
Hawlgalladaan ayaa ka danbeeyey kadib markii habeenimadii xalay ahayd labadaasi magaalaba lagu dilay labo mas?uul oo ka tirsan dawladda Puntland, kuwaasi oo kala ahaa guddoomiyihii maxkamadda sare ee gobolka Bari Max?ed Cabdi Awaare, iyo xildhibaan ka tirsan golaha wakiillada Puntland oo lagu magacaabi jiray Ibraahim Cilmi Gaab kaasi oo lagu dilay maqaaxi shaaha laga cabbo oo ku taalla magaalada Garoowe.
Ciidanka ammaanku intii ay illaa xalay hawlgalladaan ku guda jireen, waxay qabteen dhawr qof oo lagu tuhunsan yahay ku lug lahaansha falal danbiyeedyadii xalay dhacay ee lala beegsaday mas?uuliyiinta dawladda.
Saddex qof oo deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka Bari ayaa ciidanku u qabteen dhacdadii dilka ahayd ee loo gaystay guddoomiyihii maxkamadda ee sare ee gobolka Bari alle ha u naxariistee garyaqaan Max?ed Cabdi Awaare.
Saraakiisha ammaaanka ee gobolka Bari oo ay idaacadda Daljir wax ka weydiisay ragga la qabqabtay iyo waxa loo haysto, ayaa ka gaabsaday in ay bixinyaan faahfaahin dheeraad hase yeeshee waxaa ay sheegay in ay socdaan baaritaanno lagu xaqiijinayo danbiyada lagu tuhunsan yahay raggaasi.
Dhanka kalana ciidanka ammaanka ee magaalada Garoowe ee xarunta dawladda Puntland, ayaa hawlgal ammaan oo ay sameeyeen iyana ku xir-xiray dhawr qof oo looga shakiyey in ay wax ka ogaayeen dilka xildhibaan Ibraahim Cilmi Gaab oo xalay fiidkii lagu dilay gudaha magaalada Garoowe.
Saraakiisha ciidanka bileyska ee magaalada Garoowe oo ay saaxaafaddu weydiisay dadka la xir-xiray ayaa sheegay in uu jiray tuhun ku saabsan in ay faraha kula jireen falal ammaan darro hase ahaatee saraakiisha bileyska waxay xaqiijiyeen in dadkaasi baaritaan kadib la sii dayn doono.
Mas?uuliyiintii dawladda Puntland ee xalay lagu dilay magaalooyinka Boosaaso iyo Garoowe, ayaa saakay aas qaran oo aad u ballaaran loo sameeyey waxaana aasitaankooda oo ka dhacay labadaas magaalo ka soo qaybgay madax ka tirsan dawladda Puntland oo isku jira golayaasha kala duwan ee dawladda iyo shacab aad u tiro badan.
Dhawrkii todobaad ee ugu danbeeyey deegaannada Puntland waxaa ku soo kordhay falal ammaan xumo oo si is daba joog ah uga dhacayey magaalooyinka waa weyn ee Puntland, waxaana mas?uuliyiinta dawladda ee xagga amnigu ay ballan ku qaadeen in ay ku dhaqaaqi doonaan qorshayaal ammaanka Puntland lagu xaqiijinayo.
Marwo Caasha Geelle Diriye oo booqasho uga bilaabatay Boston, MA.
?Ibraahim Cilmi Gaab, mudane ka tirsan golaha wakiilada Puntland oo lagu dilay Garowe.